Chitatu 26 Ndira 2022
Zviono Iyo MYKITA MyLON kuunganidzwa yakagadzirwa neyakareruka polyamide zvinhu zvine akakosha akasarudzika munhu. Ichi chakakosha chinyorwa chakagadzirwa neyakagadzika nekutenda kune yakasarudzika Selection Laser Sinching (SLS) maitiro. Nekutsanangudza zvekare zvekare iyo yechinyakare uye oval-round panto yekuona chimiro chaive chakagadzirwa mumakore e1930, iyo BASKY modhi inowedzera uso hutsva kuunganidzwa uyu wekutangisa uyo wakambogadzirwa kushandiswa mumitambo.
Chipiri 25 Ndira 2022
Muvhuro 24 Ndira 2022
Bangili Kune akawanda marudzi akasiyana emairefu nema bangle: vagadziri, goridhe, mapurasitiki, asingadhuri uye anodhura… asi akanaka zvaari, iwo ese anongori uye chete masongo. Fred chimwezve chinhu. Aya cuffs mukureruka kwavo anomutsidzira hukuru hwekare, asi ivo ndevechizvino. Vanogona kupfekwa vasina maoko pamwe neasir blouse kana nhema nhema Aya mabhureki akasarudzika nekuti anouya sepairi. Iwo iwo akapepuka kwazvo izvo zvinoita kuti kupfeka zvipfekeke. Nekupfeka, mumwe anozotariswa!
Mutsipa Uye Brooch
Svondo 23 Ndira 2022
Mutsipa Uye Brooch Dhizaini yakafuridzirwa nehunyanzvi hweNeoplatonic yemacrocosm uye microcosm, vachiona maitiro akafanana achiwedzeredzwa mumatanho ese epadenga. Ichitaurazve chiyero chegoridhe uye fibonacci sequence, mutsipa unoisa chimiro chemasvomhu inotevedzera iyo phyllotaxis maitiro anoonekwa mune zvisikwa, sekuonekwa kwezuva nezuva, daisies, uye zvimwe zvirimwa zvakasiyana. Iyo goridhe torus inomiririra iyo Yese, yakafukidzwa mumucheka wedenga-nguva. "Ini Ndiri Hydrogen" panguva imwe chete inomiririra muenzaniso we "The Universal Constant of Design" uye muenzaniso weiyo Universal pachayo.
Mugovera 22 Ndira 2022
Upcycled Zvishongo Yakanaka, yakajeka, yakashongedzwa zvishongo, yakagadzirirwa kunze kwekuda kushandisa marara kubva mukugadzirwa kwaClaire de Lune Chandelier. Iyi tambo yakaverengeka yakaverengeka nhamba yekuunganidzira - zvese zvinotaurira nyaya, zvese zvinomiririra chaizvo kutarisisa kwehunyanzvi mune huzivi hwemugadziri. Kujeka kunokosha chikamu chevakagadziri pachavo uzivi, uye izvi zvinomuratidzwa nesarudzo dze acrylic yakashandiswa. Kunze kwegirazi acrylic yakashandiswa, iyo pachayo inoratidza mwenje, izvo zvinyorwa zvinogara zviri pachena, ruvara kana zvakajeka. CD kurongedza rinosimbisa pfungwa pfungwa repurposing.
Chishanu 21 Ndira 2022
Rin'i Yakanakisa runako dombo - piropu - yayo chaiyo inounza ukuru uye hunyoro. Ndiwo runako uye kusarudzika kweibwe rataridzwa chifananidzo, icho chakanangidzirwa kushongedza remangwana. Paive paine chekuda kugadzira chimiro chakasarudzika chebwe, chaizomutakura mumhepo. Iro dombo rakadhonzwa kupfuura rarakabata simbi. Iyi formula inoshuvira kuchiva uye inokwezva simba. Izvo zvaive zvakakosha kuchengetedza chimiro chekare, kutsigira maonero emazuva ano ezvishongo.
Zviono Tarisa Bangili Mutsipa Uye Brooch Upcycled Zvishongo Rin'i